“ ကားအသစ် ဝယ်တော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ၊ရာထူးတိုးတော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ ” ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ ) – Amara News
“ ကားအသစ် ဝယ်တော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ၊ရာထူးတိုးတော့မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ ” ( ကောင်းလွန်းလို့ဖတ်ကြည့်ပါ )
အိမ်ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ကားအသစ် ဝယ်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။အိမ်ထောင်ပြုတော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။အပန်းဖြေခရီးထွက်တော့ မှာလား၊ တိတ်တိတ်နေပါ။ကျောင်းတက်တော့ မှာလား တိတ်တိတ်နေပါ။ရာထူးတိုးတော့ မှာလားတိတ်တိတ်နေပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အကောင်အထည် ပေါ်လုပေါ်ခင် အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ့်အကျိုး မလိုလားတဲ့ မိတ်ဆွေတုတွေကို သွားပြောမိတဲ့အတွက် မျှော်လင့်ထားတာတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
‘မိတ်ဆွေပါ’ ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ထက်သာ မနာလိုသူတွေရဲ့ ကွက်ကျော်ရိုက်မှု၊ ကုလားဖန်ထိုးမှုကြောင့် ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တွေကို လက်တစ်ကမ်း အလိုလောက်မှာ လက်လွှတ် ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် …. ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးပါ၊မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း အများစုဟာ သင်အခြေအနေ ကောင်းတာကို မြင်ချင်ကြပေမယ့် သူတို့ထက် သာသွားမှာကိုတော့ ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်၊တစ်အူတုံဆင်း မိသားစုတွေမှာတောင် လူမသိ၊ သူမသိ မနာလိုမှုဆိုတာ ရှိတတ်စမြဲပါ
“ ကားအသဈ ဝယျတော့မှာလား တိတျတိတျနပေါ၊ရာထူးတိုးတော့မှာလား တိတျတိတျနပေါ ” ( ကောငျးလှနျးလို့ဖတျကွညျ့ပါ )
အိမျဝယျတော့ မှာလား တိတျတိတျနပေါ။ကားအသဈ ဝယျတော့ မှာလား တိတျတိတျနပေါ။အိမျထောငျပွုတော့ မှာလား တိတျတိတျနပေါ။အပနျးဖွခေရီးထှကျတော့ မှာလား၊ တိတျတိတျနပေါ။ကြောငျးတကျတော့ မှာလား တိတျတိတျနပေါ။ရာထူးတိုးတော့ မှာလားတိတျတိတျနပေါ
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အိပျမကျတှေ၊ ရညျမှနျးခကျြတှေ၊ အကောငျအထညျ ပျေါလုပျေါခငျ အခြိနျမြိုးမှာ ကိုယျ့အကြိုး မလိုလားတဲ့ မိတျဆှတေုတှကေို သှားပွောမိတဲ့အတှကျ မြှျောလငျ့ထားတာတှေ ပကျြစီးတတျပါတယျ။
‘မိတျဆှပေါ’ ဆိုတဲ့ ကိုယျ့ထကျသာ မနာလိုသူတှရေဲ့ ကှကျကြျောရိုကျမှု၊ ကုလားဖနျထိုးမှုကွောငျ့ ရညျမှနျးခကျြ အိပျမကျတှကေို လကျတဈကမျး အလိုလောကျမှာ လကျလှတျ ဆုံးရှုံးရတတျပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ …. ဆိတျဆိတျနခွေငျးသညျသာ အကောငျးဆုံးပါ၊မိတျဆှအေပေါငျးအသငျး အမြားစုဟာ သငျအခွအေနေ ကောငျးတာကို မွငျခငျြကွပမေယျ့ သူတို့ထကျ သာသှားမှာကိုတော့ ကွောကျရှံ့တတျကွပါတယျ၊တဈအူတုံဆငျး မိသားစုတှမှောတောငျ လူမသိ၊ သူမသိ မနာလိုမှုဆိုတာ ရှိတတျစမွဲပါ။
Previous Article “ ဆင်းရဲပေမဲ့ ကောက်ရတဲ့ သိန်းချီပိုက်ဆံတွေကို ပိုင်ရှင်ထံ မရမက ပြန်ပေးတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ လေးစားဖွယ်စိတ်ဓာတ်လေး ”
Next Article မိမိမွေးနေ့ရောက်တဲ့အခါ ဒီလိုလေး လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ